Viber ကို | October 2019
အဓိက Viber ကို
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုအပေါ် Viber ကို install လုပ်နည်း
မည်သို့ပင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုအရင်းအမြစ်များကိုဝင်ရောက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ကိရိယာ၏, လူတွေသန်းပေါင်းများစွာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဖိုင်များကိုကြီးမားတဲ့အရေအတွက်က pass နှင့် Viber ကိုဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပြီးအသံနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု။ အနည်းဆုံးက၎င်း၏ Cross-platform အားဖြင့်မောင်းနှင်မရကောင်းကင်တမန်၏ကျော်ကြားမှု, အကြောင်း, မိုဘိုင်းနှင့် desktop ပေါ်မှာ operating system မြားအမျိုးမျိုး၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်ပတ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့လိပ်စာစာအုပ်ကိုမှအဆက်အသွယ်ကိုဖျက်ပစ်ရန် Viber ကို
အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း - ပေါရာဏ၏မှတ်တမ်းများ Viber ကိုလိပ်စာစာအုပ်ပျော်စေ။ အဘယ်အရာကို iPhone မှာ, သင်က Android device ကို install လုပ်တမန်တစ်ဦးအဆက်အသွယ်ကဒ်ကိုဖျက်ပစ်ရန်လိုကျလြှောကျနိုငျလိုက်ပြီး, နဲ့ Windows အောက်မှာ operating ကို PC / Laptop ကိုသင်ယူဖို့အောက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
ကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် Viber ကို program ကို install လုပ်ခြင်း
အချိန်ကြာမြင့်စွာ Viber ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအသုံးပြုသူများအကြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ၏လဲလှယ်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ အားလုံးလူကြိုက်များပလက်ဖောင်းပစ္စုပ္ပန် messenger ကိုဗားရှင်းမှာ။ တစ်ဦးချင်းစီ version ကို၏ installation ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းမေးခွန်းများကိုရှိသည်။
အန်းဒရွိုက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် Viber ကို, iOS, Windows ကနေစာပေးစာယူထိန်းသိမ်းပါ
အခြိနျမှနျမှကစေလွှတ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်သုံးစွဲသည့်အချိန်များအတွက်ရရှိခဲ့မက်ဆေ့ခ်ျ၏သမိုင်းကယ်ဖို့လိုအပ်အတော်များများ Viber ကိုအသုံးပြုသူများသည်။ Android, iOS နဲ့ Windows running devices တွေကိုသုံးပြီးစာပေးစာယူသင်တန်းသားများကို Vaybera ၏မိတ္တူကိုဖန်တီးရန် messenger ကို developer များ အသုံးပြု. အကြံပြုသောအရာကိုနည်းစနစ်စဉ်းစားပါ။
Viber ကိုက c ကို Android-smartphone ကို, iPhone နှင့် PC ကိုမှတ်ပုံတင်လုပ်နည်း
အကောင့်တစ်ခု Register - ဆိုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများ၏စွမ်းရည်များဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့အဓိကတာဝန်။ Viber ကိုမှာ account ဖန်တီးပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားအဆိုပြုထားနိမ့်ပစ္စည်း - တစ် WAN အနှံ့ရက်စွဲကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့စနစ်များကိုမှလူကြိုက်အများဆုံးတဦး။ တကယ်တော့သစ်တစ်ခုအဖွဲ့ဝင်ဝန်ဆောင်မှုမှတ်ပုံတင်များ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအကျယ်ချဲ့ရိုးရှင်းသောဖန်တီးသူ Vaybera ဖြစ်ပါတယ်။
Android, iOS, Windows အတွက် Viber ကိုအတွက်အဆက်အသွယ်ပေါင်းထည့်ခြင်း
သူတို့ကိုသတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်းရန်သည်အခြားဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဝင်များ၏အမည်များနှင့်ဖေါ်ထုတ်ရန်လက်လှမ်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေမပါဘဲမဆိုတမန်, Viber ကိုအဖြစ်ပင်ထိုကဲ့သို့သော function ကိုတစ်ဦးနီးပါးအသုံး software ကို tool ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်, များသောအားဖြင့်အကောင့်ကိုသက်ဝင်ပြီးနောက်အသုံးပြုသူပြုထားတဲ့ပထမဦးဆုံးအရေးယူ, - ဤအကြောင်းအရာကို client ကိုလျှောက်လွှာဝန်ဆောင်မှုဖုန်းစာအုပ်ထဲသို့ပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။
IPhone အတွက် installation နည်းလမ်းများ messenger ကို Viber ကို
Cross-platform ကို messenger ကို Viber ကို Apple ကစမတ်ဖုန်းအပါအဝင် device ကိုအမျိုးမျိုးအပေါ်အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုအစီအစဉ်များ၏စာရင်းထဲတွင်ရာအရပျ၏မာနထောင်လွှားကြာပါသည်။ ဖြစ်နိုင်အခြေအနေများအမျိုးမျိုးအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများ၏စွမ်းရည်မှလျင်မြန်စွာလက်လှမ်းရရှိရန်အောင်, iPhone အတွက် Viber ကို install လုပ်ဖို့စာဖတ်သူတော်တော်များများအကျင့်တို့နှင့်ပစ္စုပ္ပန်ဆောင်းပါးအပေးအယူ၌တည်၏။
Android, iOS, Windows အတွက် Viber ကိုတစ်ဦးအဆက်အသွယ်ပြန်ဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
ထိုတမန် Viber ကိုများတွင် "က Black list ကို", သင်တန်း, အသုံးပြုသူများအ option ကိုရန်လိုအပ်သောနှင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တဘက်၌သော့ခတ်၏အသုံးပြုမှုကိုမတည်ရှိပါဘူးလွဲပြီးတဖက်သတ်သည်လူကြိုက်များအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု၏မလိုချင်တဲ့သို့မဟုတ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုရပ်ဆိုင်းဖို့တခြားလမ်းမှအလျင်အမြန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်။
သင့်ရဲ့ဖုန်းကို Viber ကိုက c အန်းဒရွိုက်သို့မဟုတ် iPhone ကို update လုပ်ဖို့ကဘယ်လို
လူသိများသည်နှင့်အမျှမည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်း၏သည် Periodic update ကိုမသက်ဆိုင် devaysa နှင့် operating system အဖြစ်အခြေခံဟာ့ဒ်ဝဲပလက်ဖောင်းနီးပါးအားလုံးခေတ်သစ် applications များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ bessboynogo လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာလူကြိုက်များ messenger ကို Viber ကို update လုပ်ဖို့က Android, iOS device ကိုအောက်မှာလည်ပတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါစို့။
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Viber ကို update ကိုအစီအစဉ်ကို
Viber ကို Messenger ကိုကို Windows operating system အပါအဝင်အားလုံးလူကြိုက်များပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ယခင်အသင်းတော်များ၏အ bug တွေကို fix, features အသစ်တွေကိုထပ်ထည့်, ပုံမှန်တိုးတက်လျက်ရှိသည်။ တချို့ကအသုံးပြုသူများကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲ၏အဆင့်မြှင့်ဖို့ဆက်စပ်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။
Android, iOS နဲ့ Windows များအတွက်မက်ဆေ့ခ်ျကို Viber ကိုဖျက်ပစ်ပါ
အခြားပါဝင်သူက c Viber ကိုပုချက်တင်ကနေတစျခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမက်ဆေ့ခ်ျ၏ဖယ်ရှားရေးနှင့်တမန်အတွက်ထုတ်ပေးတခါတရံအားလုံးစာပေးစာယူ - ဝန်ဆောင်မှုအခွင့်အလမ်းနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုအကြားအတော်လေးရေပန်းစား။ အဆိုပါဆောင်းပါးက Android, iOS နဲ့ Windows အတွက်ဒီရည်မှန်းချက် Viber ကို-client ကိုလျှောက်လွှာအတွက်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအကောင်အထည်ဖော်မှုဖော်ပြသည်။
Android, iOS, Windows အတွက် Viber ကိုတစ်ဦးအဆက်အသွယ်ပိတ်ဆို့ဖို့ကိုဘယ်လို
https://termotools.com my.termotools.com © Viber ကို 2019